5 Emebi Ego ahia izere | Martech Zone
Otu n'ime ihe omuma ihe omuma anyi kesara bu igwa SaaS Budget Budget na kpọmkwem pasent nke ego ha nwetara ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emefu iji lekọta ma nweta oke ahịa. Site n'itinye ego ahia ahia gi na onu ogugu onu ahia, o na enye ndi ahia gi ka ha bawanye onu ahia gi dika ndi ahia gi choro. Ewe ego na-ewepụta ewepụghị nsonaazụ ... ma ọ bụrụ na ịchọta ebe nchekwa na mix.
Ihe omuma a sitere na Mgbasa Ozi MDG, 5 Nnukwu Mmefu Mmefu Marketingzụ ahịa Zere, na-egosipụta mpaghara ise ebe njehie na ikpe na-eduga na mmefu na-ezighi ezi yana otu esi ebute oge gị, ike gị na mmefu ego gị mgbe ị na-emejuputa atumatu ahia.
Mmefu ego nke Ahịa:
Malite na Data Ọjọọ - Ndị ụlọ ọrụ kwenyere na 32% nke data ha ezighi ezi, na nkezi. Nke a na-apụghị ịdabere na data, nke sitere na imprecise nchịkọta dashboards na nnukwu oghere na ọdụ data ndị ahịa, na-ejikọ nhọrọ nhọrọ mmefu ego na-adịghị mma.
Enweghị ike ịchịkọta Ahịa - 50% nke ndị ahịa anaghị enwe afọ ojuju maka mbọ ahịa ụlọ ọrụ ha. Ekwesiri imeputa mmefu ego ahia obula na ngalaba ndi ozo, karia ahia. Ọzọkwa, mmefu ọ bụla kwesiri ijikọ aka na azụmaahịa a tụrụ anya ya.
Inbanye na Profaịlụ arụ ọrụ - 52% nke ndị ahịa na-ekwu na email bụ otu n'ime ọwa kachasị dị irè ha na-eji mana ndị ahịa na-agbanyekarị ego na usoro ndị ọzọ n'agbanyeghị arụmọrụ nke email. Ọ dị mkpa ịnọgide na-abawanye ego na ihe na-ama na-arụ ọrụ.
Eleda ọsọ nke mgbanwe - Na 2017, a na-eme atụmatụ dijitalụ na akaụntụ maka 38% nke ngụkọta mgbasa ozi US, na ọtụtụ teknụzụ ọhụrụ na-apụta nke nwere ike ịkwagide ịrị elu ngwa ngwa nke dijitalụ nyegoro na afọ ndị na-abịanụ.
Nyochaa Obere, Ọtụtụ ihe - 70% nke ụlọ ọrụ anaghị anwale ahịa mkpọsa na ndị ahịa mgbe niile. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnwale ngwa ngwa na ịghachite n'etiti ndị ahịa ahịa, ọwa, na atụmatụ iji ihe atụmatụ agile ahịa.
Tags: ihe ojoommefu egoagbanwe agbanwedataemail Marketinginyochamarketingahia mmefu egoọhụrụNkwado ire ahịatesting
Aug 14, 2017 na 10:02 PM
Abụ m COO ugbu a maka ihe ndị na-emepụta ihe mepere emepe ebe a na Indy, Grindery. Na otu ihe m na-enweghị ike ịchụpụ n'ụlọ zuru oke bụ mkpa data dị. Anyị bi n'ime ụwa nwere data karịa, nyocha, yana ike itinye ozi ahụ n'ọrụ iji mee mkpebi SMARTER. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m mkparịta ụka nke bidoro, ".. ọ dị m ka .." ma ọ bụ "… ihe ọ dị m ka…". Ajuo m, gini bu udi ihe nlere ka unu were? Kedu ihe data ahụ na-egosi?
Nke a bụ ezigbo ozi infographic, ana m ekele gị maka amamihe gị. Ugbu a, m na-aga webinar na ụfọdụ saas email